CEEB: Arsenal Oo Gaadhay Heer Ay Taleefano Ku Wacdo Jamaahiirteeda Si Ay Uga Iibiso Tikidhada Final-ka Europe League Kaddib Markii Kala Badh La Iibsan Waayay. - Gool24.Net
Kooxda Arsenal ayaa ku ceebaysan inay qaar kamid ah jamaahiirteeda taleefano toos ugu wacday iyada oo isku dayaysa inay ka iibiso tikidhada Final-ka Europe League ee ay la yeelan doonaan kooxda ay London kawada socdaan ee Chelsea.
Final-ka ayaa sanadkan lagu ciyaari doonaa magaalada Baku ee dalka Azerbaijan taas oo muujinaysa in jamaahiirta ka safraysa magaalada London ay safri doonaan 5,600 Mayl.
Dabcan goobta lagu ciyaarayo ayay dooratay UEFA oo aan haatan waxba laga bedeli karin balse dad badan ayaa su’aal ka keenay sababta ay Baku ugu doorteen dookha koowaad.
Iyadoo safaradaas dhaadheer ay galayaan jamaahiirtu ayaa la sheegayaa in dad badani ay doorteen inay gabi ahaanba iskaga maqnaadaan ka qayb galka gegida uu kulankaasi ka dhacayo.
Waxa ugu horreynba yaab lahayd in labada kooxoodba la siiyay tikidho min 6,000 ah iyadoo garoonku uu qaado dad dhan 69,000 laakiin waxa gadaan la wanaagsanaaday qorshahaas maadaama labada kooxoodba ay ku dhibtoonayaan iibinta tikidhada.
Wargeyska The Sun ayaa sheegaya in Arsenal ay iibisay kaliya 3,500 oo ah ku dhawaad kala badhka tikidhada si lamid ahna ay Chelsea isla tiradaas oo kale iibisay.
Arsenal ayaa qaaday talaabo layaab leh oo ah inay si toos ah u wacato jamaahiirteeda gaar ahaan kuwa tikidhada xilli ciyaareedka oo dhan haysta isla markaana ay doontay inay ku qanciso inay iibsadaan tikidhada inta hadhay.